I-American Golden Retriever: Ingabe le yiGoldie enhle kakhulu kuwe? - Izinhlobo
IGolden Retrievers imvamisa ayidingi izingeniso ezikhethekile. Ingenye yezinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu - hhayi e-US kuphela, kodwa emhlabeni!
Ziyizilwane ezifuywayo ezihamba phambili zomndeni ezishiya imikhondo yamandla amahle nomaphi lapho ziya khona.
Hlangana ne-American Golden Retriever
Kepha bewazi ukuthi kunezinhlobo ezintathu zamaGoldies? Sizibalula zonke, kodwa ake sigxile kulokho okwenza i-American Golden Retriever ivelele.
Yini i-American Golden Retriever?
Ibukeka kanjani i-American Golden Retriever?
Isimo: I-American Golden Retriever njengesilwane esifuywayo
Ukunakekela i-American Golden Retriever
Ukuthola imidlwane yase-American Golden Retriever iyathengiswa
Izinhlobo Ezifana ne-American and English Golden Retriever
Ingabe kufanele uthole i-American Golden Retriever?
I-American Golden Retriever ingenye yezinhlobonhlobo zalolu hlobo, kodwa ziyefana nanoma iyiphi i-purebred Goldie .
Ake sixoxe kancane ngemvelaphi yale nja. Ungalandelela umlando we- Ukubuyisa Okusagolide emuva maphakathi nekhulu le-19 leminyaka eScotland lapho zazisetshenziselwa ukuzingela nokubuyisa izinyoni zamanzi.
Lolu hlobo lokuzingela olunekhono ekugcineni lwaya eNyakatho Melika nakwamanye amazwekazi, lwaqhubeka nokwanda kwalo ekuthandeni. Namuhla, ziwuhlobo lwesithathu oludume kakhulu e-US futhi zikleliswe endaweni yesi-8 e-UK.
Abantu bakhonze uGoldens ngobuhlakani babo nangendlela emnandi , okubenze baphumelela kweminye imisebenzi efana nokuthola, ukusesha nokusindisa, kanye nezinja zosizo lokukhubazeka.
Izinhlobo: I-English Golden Retriever VS. I-American Golden Retriever
Hlangana ne-White Golden Retriever
IGoldens yaqashelwa okokuqala yi IBritish Kennel Club (KC) ngo-1913 nangokuthi I-American Kennel Club (AKC) ngo-1932. Izinga lokuzala ngeklabhu ngalinye seliguquke ukuze lihambisane nezintandokazi zabanikazi bezinja ezifundeni noma ezweni labo.
Ukuhluka okuvame kakhulu kweGolden Retriever kuqhathaniswa ne-American Goldens yiGoldies eYurophu, ebizwa nangokuthi Ama-English Cream Golden Retrievers .
Ngokuya nge- I-United Kennel Club (UKC) ejwayelekile yokuzala ye-English Goldens, banezinwele ezimfushane nezisindayo lokho woza ngemibala kakhilimu , lapho abanye babonakala sengathi banejazi elimhlophe elinemigqa yegolide.
Banenhloko nezindlebe ezinkulu ezifana nebhokisi nezindlebe ezilingana ngokulingene.
Uma kukhulunywa ngokuziphatha, izinhlobonhlobo zesiNgisi ziyaziwa ukuthi zikhona ukuzola nendlela elula yokuqeqesha .
Kwezempilo, yize zombili izinhlobo zamaGolden Retrievers zihlushwa izifo ezifanayo, i-English Goldens ingajabulela isikhathi esiningi sempilo yabo, okuyiminyaka eyi-12.
Sifuna ukucacisa ukuthi kungakhathalekile ukuthi zizalelwaphi, amakilabhu ezinja abhekisa kuzo zonke njenge- 'Golden Retrievers.'
I-American Goldens nayo inokhakhayi olubanzi futhi olugobile olunobuso obude futhi obujulile. Zinezindlebe ezimfushane namarimu afakwe eduze, ngamehlo anomphefumulo aphakathi nendawo kuya kokukhulu. Ngakolunye uhlangothi lomzimba wabo kunomsila ogobile kancane.
I- I-AKC ejwayelekile yokuzala ichaza umbala wengubo yawo ngokuthi “igolide elicebile nelicwebezelayo elinemibala ehlukahlukene.” Noma iyiphi i-Goldie enoboya obukhanya kakhulu noma obumnyama kakhulu ibhekwa njengephutha noma ayaziwa .
Zonke izinhlobo zine- ingubo yangaphansi ethambile nebhantshi eliminyene elingamanzi . Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo, zinezimpaphe eziqondile nezingubo ezijiyile.
Izindawo ezithile zemizimba yazo, njengezintamo, amathanga, nemisila yazo, unezimpaphe ezisindayo kepha hhayi ubude obedlulele . Uma uhlela ukujoyina imibukiso yezinja, ukubukeka kwemvelo njalo kuyindlela engcono kakhulu yokuhamba.
Ama-American Golden Retrievers athola malini?
I-American Golden Retriever ime noma kuphi kusuka Amasentimitha angama-21.5 kuye kwangama-24 (55 kuye ku-61 cm) ukuphakama futhi unesisindo phakathi Amakhilogremu angama-55 nangu-75 (25 kuya ku-34 kg). Abesifazane bahlala bencanyana kunabesilisa.
Yize behlakaniphile futhi beqeqeshwa kakhulu, abakwaGolden Retrievers baklanywa ukuba baqhubeke.
Noma bangahlala emafulethini kahle nje, sibancoma ukuba bangene endlini enamagceke aphephile futhi avulekile lapho bengagijimela khona badlale noma kunini lapho bafuna khona.
Wonke amaRoyal Retrievers inobungane, iqotho, ihlakaniphile, futhi izwana nezingane . Isici esisodwa esizokwenza okuhlukile kwaseMelika kuvelele ileveli yabo yamandla. Bayibhola nje elikhulu lokuzijabulisa abasebenza kakhulu futhi abasubathi.
Hlanganisa konke lokho nemvelo yabo yokuzingela enamandla, bese uthola inja engakhathali .
Njengoba bethanda ukuba yingxenye yemisebenzi yansuku zonke yomndeni, akukuhle ukushiya le pooch enobungane isikhathi eside ngoba bona zivame ukuthuthukisa ukukhathazeka ngokwehlukana .
Uma bekhungatheka futhi benesithukuthezi, lindela isilwane esidlula ezimeni ezicindezelayo, bese sonakalisa.
Ufuna ukubona ukuthi kunjani ukuba ne-American Goldie? Bheka le vidiyo ehlekisayo:
Ingabe ama-American Golden Retrievers akhonkotha kakhulu?
Lolu hlobo luyi ngokuvamile kuthule futhi kuzokhonkotha ngezikhathi ezithile . Kepha uma ubona ukukhonkotha ngokweqile kweGolden Retriever, ukuhewula, noma ukuhlafuna ifenisha, lezi kungaba yizimpawu zokukhathazeka ngokwehlukana.
Cishe kungcono kakhulu ukuthi le fido ihlale ekhaya lapho inomlingani we-canine, noma ezinye izilwane ezifuywayo ukuzigcina zingaba inkampani. Ukuba ne-pal enoboya ongadlala nayo kungasiza ekubhekaneni namandla akho we-Goldie's pent up.
Singabheka ukubuyiswa kweGolden njengokulungiswa okuphansi ngoba kudinga ukuxubha ngezikhathi ezithile.
Abanye bathi bayizinhlobo zokulondolozwa okuphezulu ngenxa yobukhulu bazo kanye nenani lezinwele abanazo, futhi bachitheka kakhulu. Kepha yini izidingo zayo zokunakekelwa?
Ngabe ukushefa i-American Golden Retriever kuyasiza ngokuchitha?
Cha, akunjalo, ngakho-ke UNGAYISHI i-Golden Retriever yakho. Noma yiluphi uhlobo oluboshwe kabili akufanele luphuce ngaphandle uma kuyindlela yokugcina ngenxa yempilo yabo noma isimo sezinwele esibi impela.
Lokho ijazi elijiyile liyabasiza ukulawula ukushisa komzimba futhi ivikele isikhumba sabo ezimweni zezulu ezahlukahlukene .
Ngokushefa izinwele zabo ezinhle, ucekela ukwahlukanisa kwabo kwemvelo futhi kuzobangela ukulimala, hhayi kuphela eboyeni babo kepha nasesikhunjeni nasempilweni yabo.
Ukulimaza i-follicle yezinwele kungasho nokuthi ijazi labo kungenzeka lingaphinde likhule kahle.
Ukuba ne-Golden Retriever kusho ukuthi uyazi isikhathi nokunakekelwa abazokudinga . Nakekela ijazi lenja yakho ngo- ukuxubha nsuku zonke , nasekuzilungiseni ngobungcweti, mlethele umkhombisi njalo ezinyangeni ezimbili.
Zihlomise ngamabhulashi amahle kakhulu eGolden Retrievers, njengefemu ibhulashi le-bristle , ukuze Ikama leGreyhound , kanye no ukucisha i-rake .
Ngabe ukuzivocavoca okungakanani okudingwa yi-American Golden Retrievers?
Ama-American Golden Retrievers awavilaphi, ngakho ukuzivocavoca ihora noma amabili nsuku zonke kuzokwanela .
Kukhona isisho esithi 'inja ekhathele iyinja ejabulayo,' kodwa akufanele uwukhiphe ngokweqile umdlwane wakho ukugwema ukufaka ingcindezi emathanjeni nasemalungeni abo angakakhuli ngokugcwele.
Ukwenza kanjalo kungaholela ezinkingeni zokuhamba, futhi kamuva, i-hip dysplasia.
Ngaphandle kokuzivocavoca umzimba, isikhathi sokudlala, nokuqeqeshwa, nikeza imisebenzi ezovuselela inja yakho ngokwengqondo. Kungaba lula njengefayela le- iphazili noma a ithoyizi - noma yini ezomenza acabange.
Ukudla okunconyelwe i-American Goldie
Ama-American Golden Retrievers angama izwela ngendlela emangalisayo isisindo , ngakho-ke ngaphandle kokunamathela kunqubo yokudla, qiniseka ukuthi uhlobo lokudla nenani lokudla kwenja onikeza isilwane sakho kususelwa ezingeni lomsebenzi wakhe, ubudala, nosayizi.
AmaGoldies akhule ngokugcwele adinga ukudla cishe izinkomishi ezi-2 kuye kwezingu-3.5 zokudla ngosuku . Gwema izindlela zokupheka ezinekhalori eliphezulu ngoba zingenza iGoldens ikhule ngokushesha okukhulu, okungakulungele ukukhula kwamathambo abo.
Ukukusiza ukhethe uhlobo lokudla okuhle kakhulu lwenja yeGold Retriever yakho, sinefayela le- isihloko lokho kungakusiza.
Ngabe i-American Golden Retrievers ihlala isikhathi esingakanani?
Ama-American Goldies anempilo efushane kancane kune-English Cream Golden Retrievers. Isikhathi esilinganiselwe sokuphila se-American Golden yiminyaka eyi-10 nezinyanga eziyi-8, kanti umlingani waso waseBrithani uvame ukuhlala iminyaka eyi-12 nezinyanga ezi-3.
Kunocwaningo olwenziwe yiGolden Retriever Club of America ngo-1998. Bathola ukuthi cishe ama-60% ama-American Golden Retrievers abulawa ngumdlavuza uma kuqhathaniswa nama-39% kuphela ama-English Golden Retrievers.
Ngaphandle komdlavuza futhi kungakhathalekile ukuthi hlobo luni, ama-American Goldens abelana ngezinkinga zezempilo, ezinjenge-hip ne-elbow dysplasia, i-Gastric Dilation-Volvulus, kanye nezinkinga zamehlo nezendlala yegilo.
Umdlwane waseAmerican Golden Retriever kungabiza noma yikuphi kusuka ku- $ 500 kuya ku- $ 2500 , kuya ngendawo yokuzalanisa, ukuthandwa kwekennel, negazi lomzali.
Umfuyi omuhle ngeke anqikaze ukukubonisa izitifiketi zezempilo kanye nanoma yimiphi imibhalo ezokusiza ukuthi wazi owangaba yipup yakho.
Futhi bebengeke nje bathengisele noma ngubani. Abafuyi abanomthwalo wemfanelo abanakekela izinja zabo bazoqinisekisa ukuthi umthengi ngumdlalo ofanele umdlwane wabo.
Abazalisi be-American Golden Retriever
Kulula ukuthola ama-purebreds online kunezinja zabaklami, okuyinto enhle, ikakhulukazi njengoba iGolden Retriever ibhaliswe ezinhlanganweni ezisemthethweni.
Nawa amanye amawebhusayithi uma uzizwa ulungele i-American Golden Retriever yakho:
Indawo yemakethe ye-AKC
Ukubuyisa kwe-Golden Meadows (Moorpark, CA)
UTsillan Goldens (ILake Chelan, WA)
Ama-Retrievers eGold Star (I-Logan, UT)
Ama-SunGolden Kennels (ILongview, CT)
I-American Golden Retriever iyasindisa
Akukona nje kuphela ukutholwa kuyindlela eshibhile yokuthola noma yiluphi uhlobo lwenja noma isilwane osifunayo, kodwa futhi kuyindlela engcono kakhulu yokunikeza i-pooch elinye ithuba othandweni nasekhaya.
Uma usukulungele ukuvula inhliziyo yakho kwi-Golden Retriever endala noma ezinye izingxube zayo, hlola lezi zindawo zokuhlenga:
Ukubuyiswa Kwegolide Okudinga Ukutakulwa (Cleveland, OH)
Ukutakulwa KweGold Retriever yaseMid-Florida (IGoldrodrod, FL)
IGoldens Ngaphandle Kwemingcele (Las Vegas, NV)
I-Yankee Golden Retriever Rescue, Inc. (Hudson, MA)
Ukutakulwa KweGold Retriever eWisconsin (ENtshonalanga Allis, WI)
Uzibuza ukuthi yiziphi ezinye izinhlobo zeRetriever ezikhona lapho? Mhlawumbe inja ebukeka njengeGoldies?
Lawa ma-canine anokufana nama-American Golden Retrievers nezinye izinhlobo zeGoldens, kepha anokuthize okuhlukile ngawo, nawo.
IChesapeake Bay Retriever
I-Nova Scotia Duck Tolling Retrievers
I-American Golden Retriever edlalwayo
I-American Goldens yenzelwe izilwane ezifuywayo ezinhle kakhulu uma ifakwe umndeni ofanele.
Badinga umnikazi okwazi ukuqhubeka nokwabo imvelo enamandla futhi edlalayo , nomuntu ongeke abashiye isikhathi eside eyedwa.
Uma unezingane ezincane, IGolden Retrievers izosebenza njengezelamani ezindala eziqaphile , ngakho-ke lokho kufanele kukutshele okuthile.
Kufanele futhi ukulungele ukubhekana nalokhu abahlaseli abadumile . Ukuba ngumnikazi wale pooch kungahle kungabi nzima kangako, kepha noma iyiphi i-pooch enalesi size ayinakuba lula kangako ukuyinakekela.
Ungazibona ngeso lengqondo uthola i-American Golden Retriever? Yabelana ngemicabango yakho esigabeni sokuphawula ngezansi.
IYorkipoo Konke Okufanele Ukwazi NgeNja YeYorkie-Poo
Umxube weBlue Heeler Border Collie: Konke odinga ukukwazi
umalusi omnyama nomnyama
ukuhlanganiswa kwamathoyizi ne-maltese
izinja zingaba namakhabe￼
inja izala namajazi we-brindle
i-siberian husky ebomvu nomhlophe
umalusi omhlophe waseJalimane okhule ngokugcwele